विदेश बाट आएकालाई नि:` शुल्क सीम कार्ड, दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ दिइने !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/विदेश बाट आएकालाई नि:` शुल्क सीम कार्ड, दैनिक १ सय ७५ रुपैयाँ दिइने !!
१९ जेठ, काठमाडौँ । सरकारले विदे`शमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरुको उद्धारका लागि आवश्यक काम अन्तिम चरण`मा पुगेका जनाएको छ । ‘नेपाल आउने नागरिकलाई ल्याउने सम्बन्धी आदेश-२०७७’ अनुसार कार्य`देश बनाएर सरका`रले ल्याउन तयारी थालेको हो ।
कर्यविधि अनुसार स्थल`मार्ग हुँदै भारत बाट आएका तथा हवाईमार्ग बाट ल्याइएका नेपालीलाई १४ दिनसम्म क्वारे`न्टिनमा राख्ने भएको छ । हवाईमार्ग हुँदै विदेशबाट आएका मानिसको ‘कन्ट्याक ट्रेसिङ’सहज बनाउन सरकारले नै निस्शुल्क सीमकार्ड उपलब्ध गराउने निणर्य पनि बैठकले गरेको छ ।
निशुल्क सीम`कार्ड व्यवस्था गर्न दूर`सञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम सँग समन्वय थालेको छ । यसबाट उनीहरुको निगरानी गर्न सजिलो हुने जनाईएको छ । यसरी उपलब्ध गराइएको सीमकार्ड कम्तिमा ६० दिन सम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कसैले पनि यो सीमकार्ड प्रयोग गरिएका मो`बाइल ‘अफ’गर्न पाइने छैन ।
त्यस्तै दैनिक प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्ने भएको छ । तर, यो रकम क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिलाई नभएर क्वारेन्टाइन राखिएको पालिकालाई दिइनेछ । यसले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको ठहर छ ।
भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसलाई ‘होल्डि`ङ सेन्टर’मा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र ७ प्रदेशका ७ लाइनमा विभाजन गरेर स्थायी ठेगानाअनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको सवारीमा उनीहरु सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपा`लिकाको क्वारेन्टाइन जानु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
जेठ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारत र तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसलाई स्वदेश भित्रेयाउने सम्बन्धि ‘कोभिड-१९ को विश्व`व्यापी संक्र`मणको कारण बाट उत्प`न्न अस`हज परि`स्थितिमा स्वदे`श आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरि`कलाई स्वदेश आउन सहजी`करण गर्ने सम्बन्धी आदे`श २०७७’जारी गरि`सकेको छ ।